Tag: subscribe » Martech Zone
Tag: nokunyora magwaro
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Kana iwe wanga uri muverengi webhuku rino kwechinguva, iwe unoziva kuti ndinozvidza zvakadii email nekupesana nevezvenhau nharo kunze uko. Kusunungura kugona kuzere kwechero zano rekushambadzira, kuenzanisa iwo mishandirapamwe pamatanho kunosimudzira mhedzisiro yako. Hausi iwo mubvunzo wekurwisa, iwo mubvunzo we uye. Nerumwe neumwe mushandirapamwe pane chiteshi chega chega, ungaita sei kuti uve nechokwadi chekuwedzera kwemitengo yemhinduro pane yega chiteshi iwe yauinayo Email? Zvemagariro? Kana
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti BrightTag, yegore-based kushambadzira chikuva chevatengesi veInternet, yatenga Signal. Signal inzvimbo yepakati yekutengesa yemuchinjikwa chiteshi kushambadzira kuburikidza neemail, SMS uye midhiya yemagariro. Zviratidzo zvinoratidza: Email matsamba enhau - pre-yakavakwa, mafoni-akagadziridzwa matemplate eemail ekushandisa kana kugadzira yako wega. Kutumira mameseji - kuvhura chirongwa chinoshanda uye kutevedzera zvinodiwa nemutakuriri. Zvemagariro midhiya kutsikisa - shambadza chinzvimbo chako paFacebook neTwitter, uchishandisa mapfupi ma URL kuteedzera zvemukati.
Svondo, June 30, 2013 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Mwedzi mishoma yega yega, ini ndinofanirwa kuenda kuburikidza nemaemail angu ndotanga kusefa junk yese. Kubva pamapuratifomu andakaedza, kuzviziviso zvemagariro uye matsamba enhau - bhokisi rangu rekunyora rakazara. Ndiri kushandisa zvishandiso zvikuru kubatsira kuzvibata, senge Mailstrom, asi ichiri kunze kwekudzora. Unroll.me iri pano kuti ikubatsire kuti uwanezve kutonga kweako inbox. Panzvimbo pekugamuchira akawanda ekunyorera maemail mukati mezuva rese, iwe unogona kugamuchira imwe chete.
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Vhiki rino ndakawana kupedza nguva nechikwata kuSproutbox, inoshamisa tekinoroji incubator muBloomington, Indiana. Sproutbox yakavambwa nevamwe vepamusoro vanogadzira avo vakasarudza zvavaida uye zvavaive kugona kwaive kutora zano nekuriunza kumusika semhinduro. Ivo vanoita izvo chete zvekuenzana muzvirongwa zvavanofunga kutora kumusika. Ini ndapinda nhasi semugumo wekupedzisira kuSpout yavo inotevera ...
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Vanyori vako veemail vanodzvanya kuburikidza newebsite yako, kuodha zvigadzirwa zvako, kana kunyoresa zviitiko zvako, sezvinotarisirwa? Aihwa? Panzvimbo pezvo ivo havasi kungoteerera, kusazvinyora kana (kufema) kunyunyuta? Kana zvirizvo, pamwe hausi kunyatso kusimbisa kutarisira pamwe.